Ireo programa 19 tsara indrindra hanaovana video, sady maimaim-poana no tsy andoavam-bola | Famoronana an-tserasera
Ny programa tsara indrindra hanaovana video
Amin'ny fotoana ahafahanao miditra a programa manokana ho an'ny serivisy manokana izay tsy mitondra antsika mankamin'ny làlan'ny mangidy, rehefa fantatsika ny vidiny handoavantsika ny horonantsary ireo sary sy horonan-tsary samihafa izay nataonay tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny olon-tiana iray.
Manana lisitr'ireo programa sy fampiharana marobe izahay, sady karama no maimaim-poana, izay mamela anay hahatratra kalitao matihanina tsara na ho an'ny fotokevitra vitsivitsy fotsiny toy ilay voalaza fa hametahana horonantsary momba ny fianakaviana. Handinika fandaharana isan-karazany tsara isan-karazany izahay mba hanao cocktail tena mahaliana.
8 Media nazoto Composer
10 Element Premiere
13 Tale Cyberlink Power 16
Miatrika a programa maimaim-poana miaraka amin'ny fitaovana kalitao matihanina afaka ampiasain'ny olona rehetra ary na inona na inona vidiny. Andao lazaina fa mety ho tonian-dahatsary video maimaimpoana tsara indrindra izao.
Lightworks manana kinova pro izay nampiasaina hanamboarana sarimihetsika toa an'i Hollywood toa ny The King's Speech. Ny iray amin'ireo tombony azo dia ny miasa tsara amin'ny solosaina maotina ary afaka mitantana ny fakana horonantsary sy fanovana mandroso amin'ny fomba ambony. Fandaharana tena ilaina izay tokony andramanao. Aza adino fa ny interface dia tsy mitovy amin'ny an'ny hafa fantatra kokoa toa ny Premiere nataon'i Adobe. Ny kinova maimaim-poana dia mamela anao hanondrana ireo horonan-tsary amin'ny endrika MP4 ihany.
Fandaharana matihanina maimaimpoana hafa izay mila faharetana kely ianao mba hahafahanao ho tompony amin'ny fampiasana azy. Mazava ho azy, raha mahavita mandany an'io fotoana io ianao dia afaka mikirakira programa iray izay misy sivana azo ovaina ary interface tsara azo ampiasaina. Afaka miditra amin'ny valiny mahavariana ianao, saingy mavesatra ny làlan-kizarana. Raha mametraka herim-po sy fikirizana ianao dia hanana fitaovana lehibe amin'ny PC-nao.
Podemos asongadino ireo karazany maro karazana hanondranana azy ary ny fahaizany manolotra ny tonian-dahatsoratra amin'ny fampiasana sivana audio sy video. Ity dia fampiharana loharano misokatra izay afaka manolo tanteraka ny Windows Movie Maker.
Ary satria efa niresaka momba ny programa fanovana Windows izahay, Nandalo izany izahay mba hanohizanay ny fitiavana fandaharana tena fototra, fa manatanteraka tsara ny asa maha-tonga lafatra azy hanombohana amin'ny fanovana horonan-tsary. Fandraisana tsotra, na dia tena fototra aza ny valiny, dia ho sarotra amintsika ny mampiasa lafin-javatra mandroso amin'ny fanontana.
Na dia eny, manana safidy maro isan-karazany hisafidianana endrika famoronana horonan-tsary samihafa, ampio tetezamita, atsangano ny feo fa tsy ny feo sy ireo fiasa hafa azonao alaina avy amin'ny pejy rehetra izay manohana anao amin'ity programa ity. Ary izany ve hatramin'ny fiandohan'ny taona dia nijanona tsy nanohana intsony i Microsoft mankany amin'ny Windows Media Maker.
Afaka mifikitra amin'izany lamina fanaovan-dahatsary maimaimpoana manolotra fitaovana matihanina izany izahay. Mpanonta fototra izy io, fa ahoana Azo antoka fa hahagaga anao ireo fitaovana mavesatra azy, karazana sivana an-tsary sy horonan-tsary, sosona, sarontava, safidy safidy ary lakile chroma isan-karazany hamoronana efijery amin'ny karazany rehetra.
ny Fitaovana Extra Hitfilml Express dia manana vidiny manomboka amin'ny folo dolaratoy ny fanitsiana ny loko, ny fanitsiana ny fipoahana ary ny sivana famoronana hafa. Safidy lehibe hafa azo maimaim-poana. Ny kilema dia mila fandaniana loharanon-karena amin'ny solosaina, mba hahafahanao manomana azy.
Un tonian-dahatsary tsy mivantana izay manararaotra ny fahamoranany ho tonga tompon'ity programa ity. Manolotra karazana effets sy sivana isan-karazany hanatsarana ny famoronana anao, ary misy safidy fanaraha-maso na mandeha ho azy ka izay manomboka amin'ity fanontana ity dia afaka mizaka ny tenany.
Maha-tonian-dahatsoratry ny horonantsary, mamela anao hametraka clip sy singa hafa amin'ny fizotry ny fotoana rehetra tianao ary amboary eo izy ireo. Ho sanda fanampiny, ny mombamomba ny fanondranana ho an'ny Instagram sy ny fanamafisana ny sary mandeha ho azy. Tonian-dahatsoratra tena tsara, na dia tsy maintsy alefanao aza ny fanafainganana ny fitaovana alohan'ny hanondranana horonantsary.
Tsy afaka mijanona miresaka momba ny Premiere Pro izahay amin'ity fisafidianana programa ity hamoronana horonan-tsary. Izy io dia ny tonian-dahatsoratry ny tonian-dahatsoratra ary ny feno indrindra amin'ny tsipika fanonta rehetra eto amin'ity lisitra ity isika. Ny iray amin'ireo soatoaviny dia ny fahaizany miovaova mba ho ao anatin'ny rafi-pisian'ireo rindranasa misy azy. Noho izany Creative Cloud sy ny fahaizana mampiasa Photoshop hamoronana sary, After Effets ho an'ny sarimiaina sy audio miaraka amin'ny Adobe Audition.
ny 24,19 euro isam-bolana dia hanana safidy hanana Premiere Pro ianao miaraka amin'ireo fanavaozana rehetra izay mivoaka amin'ny fotoana mety. Fandaharana manokana izay hanananao toetra matihanina isan-karazany.
iray hafa ny lehibe amin'ity sokajy fandaharana ity izay voafaritra ho an'ireo mpampiasa Mac. Raha iray amin'izy ireo ianao ary manana solosaina Apple, Final Cut Pro dia iray amin'ireo safidy hendry hanana tanana lehibe amin'ny fanovana horonantsary.
Ny iray amin'ireo hatsarany dia ny fampiasan'ny vao manomboka izay manam-potoana sy maniry hianatra amin'ny Final Cut. Ambony kokoa ny vidiny ary tsy misy sarany isam-bolana, ka manomàna 329,99 euro hanana rindrambaiko somary mora izay nihatsara be.
Media nazoto Composer
Tsy maintsy milaza isika fa miatrika programa fanovana matihanina, saingy izany noho ny famoahana kinova maimaimpoana dia afaka manome sosokevitra izahay, satria safidy tsara io raha tsy manana teti-bola ampy handalovana ireo tonian-dahatsoratra voalaza etsy ambony isika.
Izy io dia programa matihanina ampiasain'ny matihanina amin'ny tetikasa lehibe. Azontsika atao ny miresaka momba ny Guardians of the Galaxy na Baby Driver, toy ireo sarimihetsika farany izay nampiasa Avid. Ny kinova Pro dia mitentina 49,00 euro isam-bolana, saingy amporisihinay kosa ny kinova maimaimpoana hanana programa mahatalanjona tsotra fotsiny. Efa mandany fotoana ianao.
Un programa natokana ho an'ny Mac ary natao indrindra ho an'ny vao manomboka izany momba an'ity olana ity. Ny rindrambaiko dia natokana ho an'ny macOS ihany, ka ny mpampiasa Windows na Linux dia afaka manadino momba ity mpamoaka lahatsoratra ity. Io ilay programa izay apetraka amin'ny Mac, ka maimaim-poana izany. Miaraka amin'ny interface interface intuitive sy tsotra dia afaka mahita haingana ny tenany amin'ny fanondranana horonantsary hanehoana amin'ny fianakaviana sy namana izy. Azonao ampiasaina amin'ny iOS ihany koa izany.
Amin'ny vidiny 100,43 euro, afaka miditra a rindrambaiko tonga lafatra ho an'ny vao manomboka ary izany no santatry ny programa misy akora betsaka kokoa toy ny Final Cul na Premiere Pro. Ny interface interface intuitive sy voajanahary dia manampy amin'ny fizotran'ny fianarana hamoahana vokatra hampisehoana amin'ny tambajotra sosialy na YouTube. Miankina amin'ny fanovana marani-tsaina, ny fahaizana mamorona GIF mihetsiketsika, sary an-tsarimihetsika mavitrika, fampisehoana an-tsary ary karazana fomba, effets ary fiovana isan-karazany.
Izy io dia programa fototra izay, araka ny asehon'ny Adobe ao amin'ny tranokalany, dia tonga lafatra ho an'ireo fanovana ireo ho an'ny horonantsary momba ny fianakaviana miaraka amina fikitika manokana. Hita amin'ny Windows sy Mac.
Una fitaovana fanovana horonantsary maimaimpoana izay mampiasa interface madio ary mora ampiasaina. Tsy manadino ireo karazana fitaovana matihanina isan-karazany amin'ny fanitsiana, izay ahafahanay mampiditra 3D rendering, effets vidéo, sary mihetsika ary maro hafa. Izy io dia programa open source ary mampiavaka azy amin'ny Linux, ankoatry ny Windows sy Mac.
Ny iray amin'ireo mampiavaka azy lehibe indrindra dia ny fanohanana mitohy handraisana fanavaozam-baovao ary hitondra fiasa bebe kokoa ary fanatanterahana voatsara. Namboarina teo ambanin'ny tranomboky FFmpeg, afaka mamaky sy manoratra karazana horonan-tsary sy sary io. Fandaharana lehibe iray hafa hanombohana ny diantsika amin'ny fanitsiana horonantsary.
Rehefa efa tafiditra amin'ny fanovana horonantsary ianao dia mirona manokana ary mitady programa miaraka amina tanjona hafa. Ohatra iray amin'ny DaVinci Resolve, a rindrambaiko fanovana horonantsary noforonina mba hanitsiana ny loko. Tsy misy programa manome fanaraha-maso feno toy izany momba ny loko.
Nanomboka ho fitaovana amin'ny fanitsiana loko izy io, nefa tamin'ny farany lasa programa fanovana tanteraka. Izy io dia ampiasain'ny mpanatontosa sarimihetsika sy ny fahitalavitra ho an'io fitaovana miloko voalaza io, saingy tsy manadino ny vokany sy ny tetezamita izy io, miampy ny fanovana ny multi-cam, ny keyframe, ny hafainganana hafainganam-pandeha ary maro hafa. Manana kinova maimaimpoana sy kinova Pro izy io.
iray hafa Avy amin'ireo manam-pahaizana amin'ny tsenan'ny mpanamboatra horonantsary ary izy io dia manana karazan-tsarimihetsika tsara ho an'ny fanitsiana feo. Io no sandany lehibe indrindra raha ampitahaina amin'ny tonian-dahatsoratra hafa, dia afaka manova feo multitrack avo lenta aza mifanaraka tsara amin'ny kalitao video lehibe. Ny Version 15 dia manolotra fanohanana amin'ny karatra sary an-tsary avo lenta, tontolo iainana miasa tanteraka, ary fanatsarana kely hafa.
Manana izany ianao kinova telo samy hafa miaraka amin'ny fandoavana tokana. Amin'izany dia lazainay fa tsy manana maodelin'ny famandrihana toy ny amin'ny Adobe Premiere Pro.
Tale Cyberlink Power 16
Solony hafa amin'ny programa hafa lafo vidy kokoa, satria mety hitranga amin'ilay teo aloha ary toa lafo ho antsika izany. Manolotra tontolon'ny asa lehibe amin'ny iray ampahatelon'ny vidin'i Vegas. Azontsika atao ny miresaka momba ny sanda sasantsasany toa ny fanavaozana tsy tapaka sy ny fahaizana manampy fiasa vaovao.
Mampiavaka azy ny fanitsiana loko ary manolotra a fitaovana isan-karazany tsara hahatratrarana ny vokatra tsara indrindra amin'ny feo tadiavina. Tsy adinonay ny fahafahany manao audio, video ary sary miaraka amin'ny fanohanan'ny fanovana multi-cam. Ho an'ny 99,99 euro dia anao daholo izany.
Es ny safidy mora indrindra amin'ireo programa izay vidiny amin'ity lisitra ity ary mametraka ny fifantohana amin'ny vokatra, ny tetezamita ary ny fanitsiana ny loko. Mametraka anao alohan'ny fanitsiana multitrack miaraka amin'ny sehatr'asa izay azo ovaina araka ny itiavantsika azy. Mahagaga ny fanolorana horonan-tsary multi-cam sy ny fanohanan'ny 4K, miaraka amin'ny fitaovana fanovana miavaka.
Aza adino ny momba ny karazana horonan-tsary sy horonam-peo, ary noho izany dia lasa safidy hafa amin'ny fandoavambola tena mora vidy. Ho an'ny 59,95 euro dia anananao ao amin'ny tranonkalany izany.
Hofaranantsika amina andiana fampiharana ho an'ny Android sy iOS ny lisitra, ary araraotina tsara amin'izay ireo fakantsary izay nihatsara sy nihatsara kokoa tamin'ny finday avo lenta. amin'ny Magisto ho an'ny iOS, afaka minitra vitsy dia afaka manana horonantsary ianao voaomana. Safidio ny fomba, mampakatra sary sy horonan-tsary, manampy mozika ary hikarakara ny fampiharana ny fanaovana ilay horonantsary toa majika ilay izy.
La Fampiharana finday Premiere Pro mamela anao hamorona horonantsary mandeha ho azy rehefa mampiasa sary sy horonan-tsary. Manolotra fanovana amin'ny tanana miaraka amin'ny fitaovana, effets ary mozika maromaro koa izy io. Izy io dia mifangaro amin'ny Creative Cloud, amin'izay ianao afaka mitondra ny montageo amina programa hafa toa ny Premiere mihitsy. Ilaina amin'ny tontolon'ny finday.
Una karazana Magisto fa ho an'ny Android noforonin'i GoPro. Azonao atao ny manampy sary sy sary an-tsary hatramin'ny 50 ao amin'ilay fampiharana, mba hamakafaka azy ireo sy hametrahana horonantsary. Manolotra fomba video roa am-polony izy ary azonao atao ny manamboatra azy ireo indray mba hanome azy endrika manokana kokoa alohan'ny hanondranana azy. Tsy dia matanjaka toa ny Premiere Clip izy io, fa hamonjy anao amin'ny olana.
Una amin'ireo rindranasa Android sarobidy indrindra manolotra karazana fiasa isan-karazany. Azontsika atao ny miresaka momba ny fitaovana fanovana haingana, ny vokatra isan-karazany ary na ny fanohanana mihetsika miadana aza. Miaraka amin'ny interface mora ampiasana, ampiasao fandaharam-potoana mahazatra izay hahatsapanao ho ao an-trano. Maimaim-poana, na dia mila fanampiny fanampiny aza ianao dia tsy maintsy mankany amin'ilay boaty.
Izahay dia mamita ity lisitry ny rindranasa sy programa ity amin'ny alàlan'ny galerin-tsary quintessential ho an'ny Android. dia afaka mamorona horonan-tsary mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny 'fahazoana' fa manana zavatra iraisana izy ireo, toy ireo vita tamin'ny mariazy na fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Manolotra ihany koa ny safidy hamoronana horonan-tsary amin'ny alàlan'ny fisafidianana andian-tsary, tsy manadino ny fahaizany manan-tsaina hanafatra sary, noho ny rafitry ny famantarana ny sary tsy dia natolony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ny programa tsara indrindra hanaovana video
Edgar Stroessner Delgado Rodriguez dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara sy feno, azoko atao ny manampy ScreenFlow, fitaovana iray hafa mora be sy mora ampiasaina, voaloa ary ho an'ny Mac ihany.
Valiny tamin'i Edgar Stroessner Delgado Rodriguez